घर दक्षिण अमेरिका फुटबल स्टोरीहरू उरुग्वे फुटबल खेलाडीहरू डिएगो गोडिन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल प्रतिभा प्रस्तुत गर्दछ "कैपिटन"। हाम्रो डाइगोगो गोडिन बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्यले तपाईंलाई बचाउनु पर्ने घटनाको पूर्ण खातालाई तपाईंको बचपनको मिति सम्म ल्याउँछ। विश्लेषणमा उहाँका बारेमा प्रसिद्धि, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सम्बन्ध जीवन, र धेरै अन्य बन्द-पिच तथ्याङ्कहरू (सानो चिन्ता) भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले आफ्नो उत्कृष्ट रक्षात्मक क्षमताहरूबारे जान्दछ तर केवल केहि डिएगो ग्वेलिनको जैवमा धेरै रोचक छ। अब अनावश्यक बिना, सुरु गरौं।
डिएगो गोल्डिन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -प्रारम्भिक र पारिवारिक जीवन
डिएगो रबर्टो गडिन लल फरवरीको 16th, रोजारियो मा 1986, उरुग्वे मा जन्मिएको थियो। उनी आफ्नो आमा, इरिस लिली र तिनको बुबा जुलियो गाउडलाई जन्मिए।
हंगरीको रोजारियोमा बढ्दो, जवान गोल्डिन, चार वर्षको उमेरमा मृत्युको दोषी हुँदा उनी गम्भीर रूपमा एक स्ट्रीममा गए। अस्तित्वको लागि Godin को धेरै लडाइँ मध्ये एक घटनाले गर्दा यो घटना रोसायोको जंगलमा शिकार भएको थियो। परिवारको रूपमा चिनेका ती चराहरू भुइँमा पसेका थिए, गोदिन र तिनकी बहिनी, लुसिआ चक्रको लागि गए र प्रक्रियामा एक स्ट्रिम (आसन्न एक क्लिफ) सँगै आए जुन सतहमा तैरने माछाहरू थिए।
जवान केटाको शिकार प्रविधिले कुटपिट गर्दा कुखुराको कुकुरलाई समात्न लगाउँछन्। सेकेन्डको बिषयमा, उनले आफैले गहिराईमा गहिरो-गहिरो पत्ता लगाए र बलियो वर्तमान द्वारा भरीरहेको थियो। लुसिआले आफ्नो आमाबाबुलाई सूचित गरिसकेका थिए जसले कुनै पनि हिचकिचाहिँ नचल्किने समयमा स्ट्रीम गर्न गाह्रो भइरहेको थियो।
घटना घटनाहरूलाई सम्झँदा पछि Godin ले प्रकट गर्यो;
"यो एक चमत्कार थियो, म चार युग उमेरमा कुनै स्विमिंग अनुभव भएको तथ्यसँग भएको तथ्य थियो कि म छाती र जाडो कपडाहरू लगाएको थिएँ। तथापि, मेरो हातमा फ्याँक्ने तरिकाले मैले मेरो जीवनलाई बचाउदियो "
डिएगो गोल्डिन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य - क्यारियर बिल्डअप
नजिकैको मृत्यु घटना पछि पछि केहि अवसरहरू हुन्थ्यो जुन गाउनाले परिस्थितिमा विरूद्ध विद्रोह गरे र त्यसलाई हटाउन खोजे। घटना पछि, उनी फुटबल बास्केटबल र एक पटक जीवनको धमकीमा तैराकी सहित एथलेटिक्समा सक्रिय रूपमा संलग्न भए।
यो लामो समयसम्म थिएन जब गडिनले फुटबलमा ठूलो निर्णय गरे, उनीहरूले 15 उमेर हुँदा एक निर्णय गरेका थिए र सधैँ सधैँ जीवनको संभावनाको क्रसमा टाढा टाँस्न थाल्छ।
"यद्यपि यो कठिन थियो कि एक खेल छनौट गर्न सक्छु म मा प्रमुख हुनेछु, म घाँसको लागि गए र अहिले सबै को छनौट गर्न को लागी सबै कृतज्ञ हुन चाहन्छु"
10 भन्दा पहिले युवा क्लबहरूमा भर्खरै युवा क्लबहरूमा नामांकन गरिएको धेरै फुटबल जिनुवंशहरूको विपरीत, जवान गाउडिनले 15 मा उमेरको अनुभव खोजेको थियो। उनीहरूको टोलीले डिसेन्सोर स्पोर्टिङमा व्यावसायिकताको खोजी गर्न थाले जसले उनीहरूको सेवामा उनीहरूलाई राहत दिए कि उनीहरूले पर्याप्त राम्रो थिएनन्। ।
विकासमा ईश्वरीय राजतन्त्रको अन्त्यमा उनीहरुबीचको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईएको छ। यसका बारेमा जानकारी गराईएको छ। डिफेंसर स्पोर्टिङको लागि।
अल्पविराम योद्धा एक को लागी सजिलै संग नहीं, एक छोटो ब्रेक लेने पछि उनले क्लब Atletico Cerro मा नामांकन को खोज गरेर एक और शटलाई दिए जो उनको परीक्षण अवसर को पेशकश गरे। गोडिनले प्रयासको क्रममा आफ्नो सर्वोत्तम प्रदर्शन गरे र युवा निर्देशक विलियम लेमसको ध्यान राखे, जसले गोविन्दलाई आफ्नो पहिलो सम्झौता दिए।
डिएगो गोल्डिन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -प्रसिद्धि उठाउनुहोस्
डिएगो Godin एटलेटिको Cerro मा अगाडिको रूपमा सुरु भयो। उनले एक मिडफिल्डरको रूपमा कार्य गर्न र अन्ततः एक डिफेंडरको रूपमा बनाइनु पहिले त्यो स्थितिमा खेल्ने मजा आयो। यद्यपि Godin नयाँ भूमिकालाई कहिल्यै फिक्री गरे तापनि उनले त्यसलाई अनुकूल गरे र क्लब नाक डे डे फुटबलको स्थानान्तरन गर्नुअघि आफूलाई क्लबको सबैभन्दा राम्रो रक्षकको रूपमा स्थापित गरे।
गोल्डन ठूलो ब्रेक 2007 मा आयो जब उनले क्लब नैसीली मा एक सीजन खर्च पछि स्पेनिश क्लब, विलार्रियल को रुचि पकडे। यो Villarreal मा थियो कि Godin खुद को लागि एक भयानक रक्षात्मक चट्टान भूल गरेर एक नाम बनाएको छ Gonzalo रोड्रिग्वेज Villarreal रक्षा को दिल मा।
उनको शीर्ष रूपले उनलाई एटलेटिको मैड्रिडको लागि एक कदम सुरक्षित गर्यो जहाँ अन्तर मिलान को विरुद्ध एक यूईएफए सुपर च्याम्पियनसिपमा उनको पहिलो ब्याट्सम्यान भयो र क्लबको शीर्ष खेलाडी मध्ये एक हो। एटलेटिको म्याड्रिडमा उनको उपस्थितिले यो टोली दुई यूरो युरोप लीग ट्राफी, एक ला लिगा ट्राफी र दुई चैंपियन लीग फाइनलमा जित्यो जहाँ उनीहरूले सिटी रियाल रियल म्याड्रिडलाई हराएका थिए। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
डिएगो गोल्डिन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
हरेक सफल फुटबल पछि, त्यहाँ एक ग्लैमरस वाग छ। डिएगो गडिन, उनको प्रेमिका, सोफिया हेरारा संग सम्बन्ध भएको छ, लिखित समय देखि लगभग चार वर्ष सम्म।
डुओ बार्सिलोना र एटलेटि मैड्रिड को बीच एक फुटबल म्याच को समयमा मिले जब सोफिया को म्याच को लागि टिकट प्राप्त गर्ने कोशिश भयो र उनको सम्बन्ध पछि देखि छ।
सोफिया हेरारा स्कूला इटालियन डि मटेभिडियोको स्नातक हो। त्यो पनि पहिले फुटबल स्टार जोस हेरारा को छोरी हो, जो उरुग्वे मा पेनालल खेल्थे। जोडा भर्खरै संलग्न भएको छ र प्रशंसकहरूले दुबैको लागि विवाहको घण्टी बजाउँछन्।
डिएगो गोल्डिन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -व्यक्तिगत तथ्यहरू
डिएगो Godin एक लडाकू र जीवित व्यक्ति को व्यक्तित्व को निर्माण गरे। संसारलाई एक कठोर ठाउँ हुन जान्दछ, उहाँले आफ्नो अस्तित्व को कौशल को सिद्धता को सिद्धान्त मा विकसित र संधै आफु को लागि उभिएको छ। एक व्यक्तित्व जसले उसलाई आफ्नो क्यारियरमा टाढाको छ।
Godin विनम्र छ, तर सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, त्यो एक टोली खेलाडी हो। डिएगो गोदाईको बारेमा बेवास्ता गर्नु पर्ने एक महत्त्वपूर्ण विवरण यो हो कि त्यो एक गोठाला हो, र जब हामी गोठालो भन्नुहुन्छ, हामी यसको मतलब यो गोठाला हो एन्टोन ग्रिजमन छोरी, मिया। (तल आफ्नो चित्र संग चित्रित)। कुनै आश्चर्य नगर्ने एक पटक उद्धारकर्ताले टिप्पणी गरे;
"म सधैं प्रयास गर्छु र मलाई पछ्याउने छोराछोरीहरूलाई राम्रो उदाहरण दिनुहोस्".
डिएगो गोल्डिन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -धेरै दाँतको कमी
अर्को घटना जो जीवनको धम्कीमा परेको थियो तर डिएगो गोडिनलाई जीवनका लागि घोडाले छोडेपछि एथेट्टिको मैड्रिडको टकरावले फरवरी 2018 मा वलिसिनाको साथमा धेरै दाँतहरू हरायो। घटना भएको बेलामा गडिनले विपक्षी गोलकीपरको साथ क्रूर हवाई चुनौतीमा संलग्न भएको थियो, Neto.
यस घटना पछि, गाउन को प्रतिस्थापित भएको थियो र उनको क्लबले एक बयान को जारी गरे पछि क्षणों पछि बाद मा भन्यो कि डिफेंडर पुनर्निर्माण सर्जरी देखि गुजरना हुनेछ। कथन पढ्न;
"डिएगो गोल्डिनले वलिसिनिया विरुद्धको खेलमा उनको अनुहारमा चोट लागेको थियो। हाम्रो डिफेंडरले आफ्नो अधिकतम अधिकतम [ऊपरी जबरजस्तीमा स्थित] डेंटेओलेभलर फ्र्रेक्चरको सामना गरेको छ। उहाँ आगामी दिनहरूमा अधिकतम मात्रामा सर्जरी गर्नुहुनेछ। "
डिएगो गोल्डिन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -कप्तान गडिन
यदि ईश्वरीय को लागी घमण्ड गर्न कुनै चीज हो यो तथ्य यो हो कि उनले चिन्ता गरे
'कप्तानशिप' को आफ्नो तेस्रो सीजन को समयमा 19 को युग मा उरुग्वेय क्लब एटेलिको सिरेरो मा। त्यसपछि, डिएगो गडिनलाई प्रिमियर डिभिजन पावरहाउस क्लब नैस डे डे फुटबलमा स्थानान्तरण गरिएको थियो जहाँ उनी एक्सएनएनएक्सएक्समा उनको आगमनमा टोलीको कप्तान भए। यसको अतिरिक्त, एथलेटिको मैड्रिडको कप्तानको हैंडब्यान्डको लागी तिनले धेरै प्रदर्शन गरेका छन्।
उनको कप्तानको क्लब क्लबबाट बाहिर जान्छ र उरुग्वे नेशनल टीम डिएगो लुगानोको पहिले कप्तानको प्रयास गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट पुनः कप्तान गर्न आफ्नो कप्तान युनाइटेड शीर्षकको रक्षामा टीमको नेतृत्व गर्न आफ्नो कप्तान ब्यान्ड डिएगो गोल्डलाई पराजित गर्यो।
डिएगो गोल्डिन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -तन्दुरुस्ती
डिएगो Godin एक फिट प्लेयर हो। यद्यपी भारी मांसपेशिहरु र Macho रुख को निर्माण संग एक नहीं, Godin एक साधारण फिट जीवन को लागि आफ्नो सबै भन्दा राम्रो कोशिश गर्दछ। उनको व्यायाम भारोत्तोलन को छूट छ, तर स्प्रिंटिंग जस्तै कार्डियरस्वास्थ्य अभ्यासहरू पनि समावेश गर्दछ।
डिएगो Godin पनि रेत डुनहरूको प्रशिक्षण र सहनशीलता जग्गामा संलग्न छ जसले खेलको क्षेत्रमा आफ्नो सहनशीलताको लागि खाता दिन्छ।
डिएगो गोल्डिन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -प्रमोटर
डिएगो Godin को उपलब्धि धेरै पिच मा छन्। तथापि, उहाँसँग केहि उल्लेखनीय व्यक्तिहरू पिच बन्द छन्। एक अचम्मका डिफेंडर हुन, यो अपेक्षा गरिन्छ कि तिनी ब्रान्डहरू र कम्पनीहरूलाई प्रमोशनको लागि एक उत्कृष्ट म्याच हुनेछ। दुई प्रमुख पुष्टि डिएगो Godin द्वारा चिनिन्छ कि उल्लेख को योग्य छन् टेक-ब्रान्ड, एप्पल र खेल पहनने उत्पादकहरु, Puma संग ती हुन्।
उनको क्लब बाट उनको समग्र आय 14.543 मिलियन डलर रेकर्ड भएको छ हालको बजार मूल्य मूल्य 22.8 मिलियन डलर हो। फलस्वरूप, उनको नेट-लायक माथिको स्तर हो। उहाँले 4.576 मिलियन डलरको वार्षिक वेतन प्राप्त गर्नुहुन्छ र 4.5 को रूपमा 2017 मिलियन डलरको अनुमानित शुद्ध मूल्य छ।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो डिएगो Godin बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी राख्नुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् !.